မိပြန်ပါပြီ ခိုးဝင် တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ( မြန်မာပြည်ထဲ ခိုးဝင်တရုတ်တွေ ပို့ဆောင်ပေးတာ မြန်မာတွေ ဖြစ်နေသောအခါ….) - Update News
မိပြန်ပါပြီ ခိုးဝင် တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ( မြန်မာပြည်ထဲ ခိုးဝင်တရုတ်တွေ ပို့ဆောင်ပေးတာ မြန်မာတွေ ဖြစ်နေသောအခါ….)
November 18, 2020 November 18, 2020 - by Best_admin
မြန်မာနိုင်ငံတာချီလိတ်မြို့တွင် အလုပ်လုပ်ရန်ခိုးဝင်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ၈ ဦးနှင့် ၎င်းတို့အားပို့ဆောင်ပေးသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၄ ဦးကို နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ကောင်းမွန် – မယ်ဟန် (မယ်ယန်းပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ် ကွင်းရှောင်လမ်း) တွင်ဖမ်းမိခဲ့သည်။
ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် ဝမ်ကောင်းမွန် – မယ်ဟန် (မယ်ယန်းပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ် ကွင်းရှောင်လမ်း) တွင် နိုဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့၊ နံနက်(၈)နာရီက သတင်းအရပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးနေစဉ် ယာဉ်မောင်းအိုက်ငင်း (၃၈)နှစ်၊ ကျိုင်းလပ်မြို့နေသူနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်အိုက်ကြွယ် (၄၀)နှစ်၊ ကျိုင်းလပ်မြို့နေသူတို့ မောင်းနှင်လာသည့် TIGER အမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသား (၆)ဦး၊ ယာဉ်မောင်းအိုက်ဆော့ (၄၁)နှစ်မောင်းနှင်လာသည့် PAJERO IO အမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသား Mr. Nao Sanguo (၃၉)နှစ်နှင့် ယာဉ်မောင်းအိုက်ငင်း (၄၄)နှစ် မောင်းနှင်လာသည့် မစ်ဆူဘီရှီဟိုင်းလပ်အမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်အပေါ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသူ Ms. Pegshan Jozi (၃၃)နှစ်တို့ကို တွေ့ရှိထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖမ်းမိတရုတ်နိုင်ငံသား ၈ ဦးဖြစ်သည့် Ms. Pegshan Jozi (၃၃)နှစ်၊ Dong Li (၃၀)နှစ်၊ Wang Yueyue (၂၅)နှစ်၊ Ling Hao (၂၇)နှစ်၊ Tan Baoxuae (၂၆)နှစ်၊ Xue Jinlin (၃၃)နှစ်၊ Mao Sanguo (၃၈)နှစ်၊ Mo Caiyong (၂၈)နှစ်တို့သည် လူမှုကွန်ယက်တွင်တွေ့ရှိသောအလုပ်ခေါ်စာအရ တာချီလိတ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် တရုတ်ပြည်ဆစ်ဆောင်ပန်းနားမြို့မှ ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းမှမော်တော်ယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ တစ်ချို့နေရာတွင် တောလမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်ဖြတ်သန်းကာ သင်္ဘောစီး၍မဲခေါင်မြစ်အတိုင်း ကျိုင်းလပ်မြို့၊ ပါလျှိုးရွာရေဆိပ်ကမ်းမှတဆင့် တာချီလိတ်မြို့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသားယာဉ်မောင်း အိုက်ငင်း (၃၈)နှစ်၊ အိုက်ငင်း (၄၄)နှစ်၊ အိုက်ဆော့ (၄၁)နှစ်၊ ယာဉ်နောက်လိုက်အိုက်ကြွယ် (၄၀)နှစ်တို့က ယွမ် (၅၀၀)ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့စဉ် အဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါခိုးဝင်တရုတ်နိုင်ငံသား (၇)ဦး၊ တရုတ်နိုင်ငံသူ (၁)ဦးတို့ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေး (လက်တလောပြဌားချက်များ) အက်ဥပဒေပုဒ်မ – ၃(၁)ကျူး ၁၃(၁)အရလည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့အားပို့ဆောင်ပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားယာဉ်မောင်း (၃)ဦး၊ ယာဉ်နောက်လိုက် (၁)ဦးတို့ကို ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ (၅) အရ ဟောင်လိတ်နယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
ျမန္မာႏိုင္ငံတာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ခိုးဝင္လာသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၈ ဦးႏွင့္ ၎တို႔အားပို႔ေဆာင္ေပးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၄ ဦးကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းက တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္ေကာင္းမြန္ – မယ္ဟန္ (မယ္ယန္းပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္ ကြင္းေရွာင္လမ္း) တြင္ဖမ္းမိခဲ့သည္။
ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ဝမ္ေကာင္းမြန္ – မယ္ဟန္ (မယ္ယန္းပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္ ကြင္းေရွာင္လမ္း) တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၈)နာရီက သတင္းအရပိတ္ဆို႔ရွာေဖြစစ္ေဆးေနစဥ္ ယာဥ္ေမာင္းအိုက္ငင္း (၃၈)ႏွစ္၊ က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕ေနသူႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္အိုက္ႂကြယ္ (၄၀)ႏွစ္၊ က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕ေနသူတို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ TIGER အမ်ိဳးအစားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား (၆)ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္းအိုက္ေဆာ့ (၄၁)ႏွစ္ေမာင္းႏွင္လာသည့္ PAJERO IO အမ်ိဳးအစားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား Mr. Nao Sanguo (၃၉)ႏွစ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းအိုက္ငင္း (၄၄)ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ မစ္ဆူဘီရွီဟိုင္းလပ္အမ်ိဳးအစားေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေပၚမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ Ms. Pegshan Jozi (၃၃)ႏွစ္တို႔ကို ေတြ႕ရွိထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖမ္းမိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၈ ဦးျဖစ္သည့္ Ms. Pegshan Jozi (၃၃)ႏွစ္၊ Dong Li (၃၀)ႏွစ္၊ Wang Yueyue (၂၅)ႏွစ္၊ Ling Hao (၂၇)ႏွစ္၊ Tan Baoxuae (၂၆)ႏွစ္၊ Xue Jinlin (၃၃)ႏွစ္၊ Mao Sanguo (၃၈)ႏွစ္၊ Mo Caiyong (၂၈)ႏွစ္တို႔သည္ လူမႈကြန္ယက္တြင္ေတြ႕ရွိေသာအလုပ္ေခၚစာအရ တာခ်ီလိတ္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ တ႐ုတ္ျပည္ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ေတာလမ္းအတိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ျဖတ္သန္းကာ သေဘၤာစီး၍မဲေခါင္ျမစ္အတိုင္း က်ိဳင္းလပ္ၿမိဳ႕၊ ပါလွ်ိဳး႐ြာေရဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားယာဥ္ေမာင္း အိုက္ငင္း (၃၈)ႏွစ္၊ အိုက္ငင္း (၄၄)ႏွစ္၊ အိုက္ေဆာ့ (၄၁)ႏွစ္၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္အိုက္ႂကြယ္ (၄၀)ႏွစ္တို႔က ယြမ္ (၅၀၀)ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့စဥ္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။
လက္ရွိတြင္ အဆိုပါခိုးဝင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား (၇)ဦး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ (၁)ဦးတို႔ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လက္တေလာျပဌားခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒပုဒ္မ – ၃(၁)က်ဴး ၁၃(၁)အရလည္းေကာင္း၊ ၎တို႔အားပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားယာဥ္ေမာင္း (၃)ဦး၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ (၁)ဦးတို႔ကို ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ (၅) အရ ေဟာင္လိတ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
Previous Article စက်ဘီးကလေးတစ်စီးနဲ့ ဓာတ်ဆီရောင်းနေတဲ့ ဘဘကို ဘာကြောင့် ငိုနေတာလဲမေးကြည့်မိလိုက်သောအခါ
Next Article ပိုက်ဆံအတွက်မဟုတ်ပဲ အချစ်အတွက် အသက် 80 အဘွားကို လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
မင်းအောင်လှိုင် ထံသို့ အငြိမ်းစား တပ်မတော်အရာရှိကြီးတစ်ဦးရဲ့ပေးစာ
US ကနေဖွဲစည်းပေးထားသည့် မြန်မာ့အရေးအထူးအကြံပေးအဖွဲ့မှ စစ်ကောင်စီအပေါ် ကြမ်းပြီ
သူမချစ်သူ အမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ဖို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ အမြဲမပြတ်လုပ်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ချစ်သူ